Ibinzana ngokubhekiselele libhekisela othandweni ekuqaleni kokubona
Isiqhelo esifanayo sesiFrentshi idiomatic le coup de foudre, i- coo d (eu) i-foodr (eu), iimeko eziqhelekileyo zezulu ngexesha elibi kakhulu ("imimoya embi"): ibhentshi okanye umbane wombane, okanye iindudumo. Kodwa, njengoko ungalindela-ekubeni isiFulentshi ulwimi loluthando - le coup de foudre linentsingiselo engumfuziselo eyaziwayo kubantu baseFrentshi abathetha: "uthando ekuqaleni," olunikeza uhlobo lokutshatyalaliswa, naye.
Intsingiselo yokufuzisela yinto eqhelekileyo yesiFrentshi.
Ukusebenzisa le Coup de Foudre ene-Etre okanye iAvoir
Ukusebenzisa okanye ukuba ne- coup de foudre kunika intsingiselo enokuthi, njengoko imizekelo engezantsi ibonisa:
1. ube le coup de foudre > ukuba uthandane ekuqaleni
Xa ndibona, i-été le coup de foudre.
Xa ndandiyibona, kwakunothando ekuqaleni.
2. ube le le coup de foudre (uthele) > ukuba uthandane (kunye) ekuqaleni
Ndine le le coup de foudre uthele uTomas / uthele iParis.
Ndathandana noTomas / Paris ekuqaleni.
Iimpawu ezingakumbi usebenzisa iConp
Igama lokukhupha linye yeemeko eziguquguqukayo kwiilwimi zesiFrentshi. Oku kuthetha ukuthini "ukuthuthumela" okanye "ukubetha," kunye:
Stroke (ikhilikithi, igalofu, ithente)
Phonsa (i dice)
Ukhohlisayo, uhleko oluthile
Ukubambisana , ngoko, akusoloko ibhekisela ekuthandeni, kodwa lixesha elihle lokukwazi, njengoko le mizekelo ibonisa:
Un coup coup à la porte> unqonkqoza emnyango
Ukungabikho koqhagamshelwano> ukuqhuma okuphantsi
Ukukhutshwa kwe-bélier > i-waterhammer; tshutshiswa
Ukungabikho kwebhola (eyaziwayo)> i-headbutt
Ukungabikho kwithuba> ingqungquthela / ukubetha inhlanhla
Ukungabikho kobuqu> unomdla kodwa unomdla osondeleyo
Ukukhutshwa kwekrayoni> ukubethelwa kwepencil
Ukungabikho kokuphefumula> ukubethelwa okubhekiselelwe kwintlekele
Enyanisweni, isiNgesi sithatha ixesha layo lokutshatyalaliswa koogonyamelo lukaRhulumente ukusuka kwibinzana laseFrentshi unomqulu we-Ét, eguqulela ngokuthi "ukuchithwa koorhulumente." Ibinzana liphantse lifana nesiNgesi: "coup d'etat" okanye ngokuqhelekileyo "ukukhupha."
Ukuwa Othandweni-Kodwa Kungekuqaleni
Ewe, ukuba awucwangcanga ukuxubusha ngogonyamelo oorhulumente, ugxininise entloko, okanye ukubetha-i-cupid-njengomtsalane okanye ukubethelela kwelanga, isiFrentshi inikeza ezinye iindlela zokubonisa intshukumo ndiwa emathandweni. Ukuthi umntu uwela othandweni ngokukhawuleza, zama enye yezi zilandelayo:
I-tomber amoureux (de), kungekhona "u-tomber en amour avec" > thandana kunye (ngokuthe ngcembe)
I-Avoir un coup de cœur (uthelelele)> unqabile
S'éprendre (de)> ukungena (njengobudlelwane)
Ungaphinda ubonise ukuba uye wathandwa ngumntu, njengoko:
Sula (de)> ukuthanda (njengento yokuthabatha)
Stic (de) > ukuwa (ngothando)
NgesiFrentshi, iincwadana ze-idiomatic zidla ngokuqondakala ukuba zithetha into ecacileyo ngakumbi kunentsingiselo yazo. Ngokomzekelo, isalathiso sithetha "ukuwa," kodwa i-romantics ekhuluma ngesiFrentshi iya kukwazi ngokukhawuleza ungathethi ngokukhubeka kodwa uzibonakalisa ngolwimi luthando.
IsiJamani kubaQaleli: Ukucela izikhokelo
Iintsingiselo zeMuzukashii ngesiJapane
Ukukhetha isenzi esiNcedisayo ngesiTaliyane
Iilwimi ze-Phrasal malunga neMali yabafundi baseNgesi
I-Jewel Beetles, i-Family Buprestidae
I-Oneonta GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Ukubaluleka koMthi womthi
Yintoni Ebangelwa Iziphepho?
Al Mayelana namalungu eZZ aphezulu